Ny Thijs H. PsyOp dia tsy maintsy manafoana ny tsiambaratelo matihanina ary efa tontosa androany: Martin Vrijland
Ny Thijs H. PsyOp dia tsy maintsy manafoana ny tsiambaratelo manokan-tena ary efa vitaina amin'izao fotoana izao
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 3 June 2019	• 8 Comments
Sarotra ny mitazona ny asa ara-psikolojika maro (PsyOps) izay efa manidina amin'izao fotoana izao. Efa nanambara aho fa ny zavatra toy ny an'i Anne Faber dia tokony hitarika amin'ny fampidirana ny 'fikarohana fitadiavana'. Ankehitriny dia hitantsika ny fampidirana io rindrambaiko io notarihan'ny haino aman-jery; izay vao nanova ny anarana hoe 'Sherlock' izy ireo, ka ny mpamaky rehefa Googling amin'ny fampiharana dia tsy mifarana ao amin'ny vohikalan'i Martin Vrijland ary hitany fa efa nomanina ela be izany.
Ny asa ara-tsaina (PsyOps) dia ampiasaina amin'ny fotoana sy fotoana mba hampidirana lalàna vaovao sy fepetra. Ity rindrambaiko ity dia toa mahasoa, fa raha ny marina dia manome rariny ho an'ny antsasa-pirenenan'i Holandy fa tsy mpitsikilo fotsiny ihany, fa manome anao koa ny zo hampiasa ny fakantsarinao, ny mikrôfo ary ny toerana, mba hahafahanao mitsara an-keriny ny tenanao.
Tamin'ny lahatsoratra nosoratako tamin'ny 29 tamin'ny volana Mey lasa teo, dia namintina famintinana fohy mikasika ny fomba tokony hitondrana ny tranga rehetra momba ny famonoana ireo taona vitsy lasa izay ny lalàna vaovao sy ny fepetra. Vakio fotsiny izy ireo indray (eto). Efa nanambara ny fampidirana ny fampiharana aho amin'ny 18 Desambra 2017 ny. Raha ny marina, amin'ireo zavatra rehetra ireo dia efa tanteraka ny zavatra nambara mialoha, saingy toa mibaribary be ny hnotisin'ny haino aman-jery ka tsy maninona raha manambara ny marina ianao; Tsy te hihaino na hahita fotsiny ny olona.
Mandritra izany fotoana izany, isika dia tafarina indray amin'ny tranga iray hafa (Anja Schaap), mba hahafahantsika maka io app vaovao io. Ny fitadiavana ny iray pyromaniac ao Gouda, angamba manampy amin'ny fampidirana haingana ny fampiharana io fitsikilovana io. Eny, Mazava ho azy fa misy sarin'ity Anja Schaap tsy hita popoka ity ary tena misy koa ny afo, fa rahoviana no hanomboka hahatsapa fa isika dia milalao olana amin'ny voary; famonoan'olona novokarina izay namorona ireo karazan-tsoratra fototra tamin'ny alàlan'ny teknolojia fampisehoana sarimihetsika (amin'ny rindrambaiko tsotra) ho toy ny 'sandoka lalina'?
Amin'ny alalan'ny rindrambaiko mora ampiasaina dia afaka mamorona olona tsy misy ianao ary mamorona tantara manontolo; anisan'izany ireo porofo, sary ary ny namana sy ny olom-pantatra izay nipoitra tamin'ny fiainana tamin'ny alalan'ny teknika lalina (click on ity rohy ity ary jereo ny fomba iasany). Ny mpijery TV na mpampiasa Facebook dia mieritreritra ny mahita sary izay toa marina. Ka noho izany dia afaka mitondra mora foana ny vahoaka ho fanekena ny lalàna vaovao. Izany no mendrika ny ezaka.
Araka ny efa voalaza, efa nambara tamiko tao amin'ny 29 May fa hisafotofoto ny sekretera matihanina. Ankehitriny dia mamaky isika de Telegraaf:
Ny herinandro lasa teo dia nanapa-kevitra ny fitsarana ao Limbourg fa tokony hizara ny sarin'i Thijs H. miaraka amin'ny manampahefana mpitsara amin'ny fanadihadiana bebe kokoa ny Mondrian. Ny klinika dia tsy te-hanome ny sary teo aloha noho ny tsiambaratelo momba ny fitsaboana. Saingy ny mpitsara dia nanapaka fa io tombontsoa io dia tokony hanome lanja ny maha-zava-dehibe ny fitadiavana ny fahamarinana. "Takatro fa ny OM dia te hahita ny sary ary handray ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ho fampandrenesana."
Mpisolovava iray mihevitra fa voahitsakitsaky ny didim-pitsarana ny lalàna? Izany dia endri-panondroana hafa indray fa mifamaly indray amin'ny tranga PsyOp isika. Tany am-piandohan'ny raharaha Brek Jos Brech dia hitanay fa ny mpisolovava Gerald Roethof dia nanaiky tsy nisy fanoherana fa ny ADN nahazoany tamin'ny tranga iray tsy ampy dia nampiasaina tao amin'ny raharaha Nicky Verstappen (raharaha tsy misy raharaham-pitsarana, satria tsy misy porofo amin'ny famonoana). Tao koa ny lalàna nodikaina nefa tsy niady. Mazava ho azy fa azo ekena fotsiny izany, satria ny tetik'asa ara-psikolojika dia voafintina ho amin'izany tanjona izany: ny fanitsiana lalàna izay tsy heken'ny rehetra mihitsy. Miaraka amin'ireo mpisolo vava an'i PsyOp, izay manenjika ny soroka amin'ny fanitsakitsahana ny lalàna, ny zavatra rehetra tokony hataonao dia ny hamadika ny lalàna farany amin'ny lalàna vaovao ary efa vita ianao.
Lisitry ny rohy loharano: rtlnieuws.nl, rtlnieuws.nl, nieuwsopbeeld.nl, telegraaf.nl
Michael P. Thijs H. Jos B. ny tranga rehetra momba ny famonoana ny media dia mitarika amin'ny fampidirana haingana ny lalàna henjana izay mahakasika ny tsirairay
Taorian'i Thijs H., ny volavolan-dalan'i Edith Schipper ho fanagadrana ny maso, nolavina tamin'ny governemanta teo aloha, dia ho voasambotry ny tsirairay
Moa ve ny media dia miara-miasa amin'ireo mpanoratra mpanoratra ary moa ve izy mivarotra ny asa nataon'i PsyOp tahaka ny ataony amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra?
Ny fampisehoana mahafinaritra an'i Marco Borsato ao amin'ny Kuip any Rotterdam!
Resadresaka mivantana miaraka amin'i Martin Vrijland ao amin'ny Telegraaf.nl miaraka amin'i Wilson Boldewijn (lahatsary)
Tags: advocaat, Anja, Anne, App, tsiambaratelo matihanina, Faber, Featured, H., psyop, voa, ondry, Sherlock, Thijs, very, tombontsoa ara-dalàna, Finday fahamarinana, lalàna, fikarohana
About ny Author (Profil profil)
Trackback URL | RSS feed
Martin Vrijland nanoratra hoe:
3 June 2019 ao amin'ny 13: 19
Fantatrao izy ireo ... ireo fanehoan-kevitra ao amin'ny media sosialy avy amin'ny olona izay milaza fa fantany ny mpanohitra. Izany no fomba fiasany. Ny tetikasa PsyOp dia manara-maso ny haino aman-jery sosialy amin'ny tafika troll: olona izay hitory fa mahalala ny vahoaka izy ireo.
Aoka ho mazava izahay: Tsy afaka manamarina ny mombamomba ny media sosialy ianao raha te hahita raha tena misy izy ireo. Na dia manana lisitry ny namana aza izy ireo na tia ny sary / horonan-tsary; na dia manana sarin'ny fianakaviana, horonan-tsary, sary avy amin'ny lasa, sns. Ireo rehetra ireo dia afaka mamorona mora amin'ny rindrambaiko. Fotoana vitsy amin'ny asa ho an'ny mpanamboatra lalombe izany. Ny namana, ny ankizy, ny ray aman-dreny, sns ... dia mety ho lalao lalina sy / na Inoffizieller mpiasa (trolls state).
Ireo valim-pitenenana ara-tsosialy sosialy dia tsy azo raisina ho matotra intsony, noho ny fahafahana ara-teknika ahafahana mandray anjara amin'ny tetikasa psyop izay manara-maso ny fifanakalozan-kevitra amin'ny media sosialy amin'ny alalan'ireto profesora sy / na Inoffizieller Staff ireto.
Midira raha hamaly
3 June 2019 ao amin'ny 13: 29
Oh eny sy "nanaraka anao nandritra ny taona maro aho" dia sazy fanokafana marim-pototra ho an'ny trolls psyop
Matthijs van den Brink nanoratra hoe:
3 June 2019 ao amin'ny 14: 21
Raha milaza ny mpisolovava fa manaiky ny filazana avy any amin'ny fitsarana ho fampandrenesana izy, dia midika izany fa tsy hanao na inona na inona aminy izy na hanaiky izany ho fampandrenesana ary tsy misy intsony.
3 June 2019 ao amin'ny 14: 34
Eny, izany koa no ataoko miezaka manambara mazava.
Camera 2 nanoratra hoe:
3 June 2019 ao amin'ny 18: 06
Manonona an'i Gouda ianao, izany no tanànan'ny labozia 🙂
Ny zava-manahirana dia voavonjy isaky ny mandeha ny fiara mpifanolo-bodirindrina. Ny afo rehetra dia doro ho an'ny tsirairay ary efa tapitra hatreto mialoha ny hamelezana ny kirihitra manodidina na ny fiara dia tsara fifehezana, lazaina, voatazona? 😉
3 June 2019 ao amin'ny 18: 15
Oh, tsy misy afo ao anaty fiara eto, misy fiara karamàna iray efa vita. tsy misy kidding, inona no tokony hataontsika
manao izany ve mba hisorohana izany tsy hitranga mandrakizay?
Mifoha aho nanoratra hoe:
3 June 2019 ao amin'ny 19: 52
Ny fomba fiasa rehetra dia niely betsaka tao amin'ilay sarimihetsika The Circle. Tsy siantifika momba ny siansa, fa fotsiny mba hahatonga ny olona hampiasa azy amin'ny alalan'ity tsiro ity. Efa niteny izany aho hatramin'ny nahitako ilay sarimihetsika.
3 June 2019 ao amin'ny 19: 53
Midika izany ny app de spionage.
Tsy maintsy midira mba hahafahana mametraka fanehoan-kevitra.
« Ny fampisehoana mahafinaritra an'i Marco Borsato ao amin'ny Kuip any Rotterdam!
Efa tsy hita intsony i Anja Schaap, PsyOp? Jereo ny antony (video) »
Total visits: 10.868.550
Ny "fanahy simba", "ny fahatsiarovan-tena", dia misy?
Henoy ny fanazavan'i Elon Musk momba ny hoavy tsy ho ela izay ahodinanay ao anaty simulation
Ny fakantsary sy ny atidoha dia mamela ny jamba hahita indray!
Ny loza vokatry ny rivotra MH17: inona koa no azontsika inoana?
Ahoana no fomba hitondrana ny fiovana lehibe raha 99% no tsy mananaina?
Mind Supply op Ny "fanahy simba", "ny fahatsiarovan-tena", dia misy?
Martin Vrijland op Ny "fanahy simba", "ny fahatsiarovan-tena", dia misy?
Mifandraisa anjara amin'ny 1.611 hafa